Tuhun laga qabo laaluush lagu bixiyo safaarradaha Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Erik Ullenhag (L) oo ku sugan madaxtooyada Rosenbad. sawir: Christine Olsson/TT
Tuhun laga qabo laaluush lagu bixiyo safaarradaha Sweden
La cusbooneeyay onsdag 24 maj 2017 kl 17.10
La daabacay onsdag 24 maj 2017 kl 08.44
Qaar ka mid ah safaarradaha uu dalkan Sweden ku leeyahay dalka dibaddiisa ayaa baaris ugu jira sidii lagu ogaan lahaa tuhun laga qabo laaluush lagu bixiyo safka loogu jiro wareeysiyada la iska qaado si lagu helo viisada dal ku galka kolka qaraabada la mideeyneyo, sida ey horey baaritaanno ugu caddeeyeen laanta wararka Ekot iyo SVT.
-Waxaa soo baxday in dadyoow saf ugu jira sidii ey ku geli lahaayeen wareeysiga qaraabada lagula midoobo in lagu casumey iney kharash ku bixiyaan sidii safka loogu hor-u-marin lahaa.
Erik Ullenhag, safiirka dalka Sweden u fadhiya magaalada Cummaan ee dalka Joordaaniya, ayaa sheegay in safaaraddaasi baaris ugu jirto dhowr kiis ee la xiriira ka ganacsiga liisaska safka.
–Weli nooma aaney soo bixin xaqiiqo cid lacag ku bixisay. Welina war uma heyno in cid safaaradda ka howl-gasha la tuhun-san yahay, way dhici kartaa inay tahay cid dibadda ka joogta, sida uu sheegay Erik Ullenhag.
Qoraallo ey heleen laanta wararka Ekot iyo laanta wararka ee SVT ayaa muujineya in wakaaladda socdaalka iyo wasaaradda arrimmaha dibaddaba ey soo gaareen xogag arrimmahaa la xiriira. Ka hor iyo kadib intii aanay laamaha idaacadduhu arrinkaa ka dhawaajin. Kuwaasina oo la xiriira safaarradaha dalkani ku leeyahay magaalooyinka Cummaan, Khartuum iyo Ankara.
Hans Henric Lundqvist, ahna safiirka dalkan uga masuulka ah safaaradda Khartuum ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale ey soo gaareen warar la xiriira falalka laaluushka looga bixiyo liiska safka ee wareeysiyada.
–War-bixinnada loo gudbiyey wasaaradda arrimmaha dibadda waxaa lagu cayimay sidoo kale Khartuum. Waana mid aannu si feejignaan ah u qaadaney annagoo baaris ka bilowney safaaradda dhexdeeda. Halis ayaannu u aragnaa war-bixinnadan oo kale, sida uu sheegay Hans Henric Lundqvist.
Baarisyada illaa hadda la sameeyey ayaan muujin in how-wadeenno safaaradda ka howl-gala ku shaqa leeyihiin. Hase yeeshee maadaama weli lagu guda-jiro baaritaankii ma dooneyaan iney ka hor-dhacaan.